တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထား ဘူဒါပတ်စ်မြို့သို့ လမ်းကြောင်းသစ် တိုးချဲ့ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် ကျင်းဟွာမြို့နှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ဘူဒါပတ်စ်မြို့တို့အား ချိတ်ဆက်ထားသော တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထား လမ်းကြောင်းသစ် ဇွန် ၇ ရက်တွင် စတင်ခဲ့စဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဟန်ကျိုး ၊ ဇွန် ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် ကျင်းဟွာမြို့နှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ဘူဒါပတ်စ်မြို့တို့အား ချိတ်ဆက်ထားသော တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထား လမ်းကြောင်းသစ်အား ဇွန် ၇ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ကုန်တင်ရထား ဝန်ဆောင်မှုအား ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် နင်းပေါမြို့၌ ဇွန် ၈ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပမည့် ဒုတိယအကြိမ် တရုတ် – ဥရောပ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း နိုင်ငံများ နိုင်ငံတကာ ကုန်စည်ပြပွဲနှင့်နိုင်ငံတကာ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ကုန်စည်ပြပွဲမတိုင်မီ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါရထားတွင် မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ ၊ အီလက်ထရောနစ် ကိရိယာများ နှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ အပါအဝင် ယွမ် ၂၁ သန်းဝန်းကျင်(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၃ သန်းခန့်) တန်ဖိုးရှိ ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ မြို့တော် ဘူဒါပတ်စ်မြို့သို့ ၁၈ ရက်အတွင်း ရောက်ရှိရန် ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် နှစ်စဉ် ၁၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ တတိယအကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထား ဝန်ဆောင်မှုအသစ်သည် ယန်ဇီမြစ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းမြို့များအတွက် ဥရောပသို့ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီး ထိရောက်မှု နှင့် အဆင်ပြေချော့မွေ့မှုရှိသော လမ်းကြောင်းသစ်ကို ဖော်ဆောင်ပေးထားကြောင်း ဟန်ကျိုးအကောက်ခွန်ဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလမှ မေလအတွင်း ကျင်းဟွာမြို့၌ ကုန်ပစ္စည်း ၂၃,၇၀၀ TEUs အား သယ်ဆောင်ပြီး တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထား စုစုပေါင်း ၂၈၆ စင်း ထွက်ခွာ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ၊ နှစ်အလိုက်တိုးတက်မှု ၅၆၅ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ၅၆၆ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး မြင့်တက်လာကြောင်း သိရသည်။
ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် နှင့် ဥရောပ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း နိုင်ငံများ(CEECs)တို့အကြား ပြည်ပကုန်သွယ်မှုသည် ယခုနှစ် ပထမလေးလတွင် ယွမ် ၃၅ ဒသမ ၄၇ ဘီလီယံအထိ နှစ်အလိုက်တိုးတက်မှု ၃၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း ဟန်ကျိုးအကောက်ခွန်ဌာနထံမှ သိရသည်။ (Xinhua)
HANGZHOU, June 8 (Xinhua) — A new China-Europe freight-train route linking the city of Jinhua in east China’s Zhejiang Province with Budapest in Hungary was launched on Monday.
1.The China-Europe freight train linking the city of Jinhua in east China’s Zhejiang Province with Budapest in Hungary is launched on June 7, 2021. (Xinhua/Hu Xiaofei)